China ichipesana neBitcoin. Iyo bubble inopera here? | Linux Vakapindwa muropa
Bitcoin yakafanana nekatsi. Pamwe unozvivenga kana kuti unozvida, asi hazvisiyi munhu asina hanya. Pkana ikozvino, Vatsoropodzi vakanga vasina kupfuura zvirevo zvedzidziso. Nekudaro, iyo inozivikanwa kwazvo cryptocurrency yakawedzera muvengi ane simba. Hurumende yeChinese.
1 China vs. Bitcoin
2 Uye mumba mako, vari sei?
Bitcoin yakawira 14% kune yayo yepasi nhanho kubva kutanga kwaKukadzi. Chinokonzeresa kwaive kusimuka kwevatongi veChinese kudzora mashandisiro emari yemadhora nemasangano emari.
Mune chirevo chakabatana chakaburitswa neInternet uye mabhizimusi emabhizimusi masangano akataura kuti masangano emari uye ekubhadhara haafanire kugamuchira mari yemadhora sekubhadhara kana kupa masevhisi uye zvigadzirwa zvine chekuita nazvo. Chirevo ichi chakatumirwa pane mumwe kunze kweiyo WeChat account yeVanhu Bhangi reChina.
Ikoko, pamusoro pekutsanangura kuwedzera kwazvino kwekukosha se "kufungidzira," vakapokana nazvo Cryptocurrencies haisi "mari chaiyo" uye haifanirwe kushandiswa yakadaro mumusika.
Akabvunzwa neThe Financial Times, Paul Haswell, mumwe wevashandi vekambani yemagweta yeHong Kong Pinsent Masons, anoti China inoda kusimudzira yayo yedhijitari mari, pamusoro pekunetsekana nezvekushomeka kwekudzora paBitcoin uye mukana wekuti vashandisi vayo vachabiridzirwa.
MuHong Kong, nharaunda inodzivirira yeChinese, hakuchina mirawu parizvino uye musika urikukura. Nekudaro, muna Mbudzi, guta reHaimari uye reMari Services Hofisi rakaburitsa zvirevo zvaizorambidza vatengesi vevatengesi kubva mukutengesa mari yemadhora.
Pfungwa ndeyekugadzira dhijitari renminbi (iyo Chinese mari), iyo yaizopa repakati bhangi rekodhi yezvose zviitiko zvemari uyen chaiyo nguva, pamusoro pekugadzira iyo inokwikwidza isina mari yekubhadhara nzira yekukwikwidzana neanozivikanwa epamhepo fintech mapuratifomu.
Uye mumba mako, vari sei?
Zvichakadaro, kuMadokero, maonero akasanganiswa.
MuUnited States, vatongi vakaita kuti zvive nyore kune vatengesi vekutengesa kutenga macryptocurrencies uye ivo vakatendera iyo rondedzero yeiyo cryptocurrency exchanges mumisika yeruzhinji. Makuru emari emuUS, akadai seJPMorgan naGoldman Sachs, vari kudzidza mukana wekupa mari mumari yedhijitari kune vatengi vavo.
Mukudzoka, European Central Bank yakaratidza kuti kusagadzikana kwemutengo we bitcoin kwakaita kuti ive bheji rine njodzi, mukuwedzera pakusimbisa "yakanyanya kabhoni tsoka uye kushandisa kwayo zvinangwa zvisiri pamutemo." Akawedzera kuti njodzi kune kugadzikana kwezvemari kwenzvimbo dzenzvimbo dzeeuro dzaive shoma, sezvo dzainge dzisina kufumurwa.
ECB yakaenderera mberi ichiti kukwira kwemutengo we bitcoin kwakapfuura zvakapfuura mabhuru emari apfuura senge 'tulip mania' neSouth Seas bubble muma 1600s nema 1700s. Yeuka kuti mutengo wakawedzera 300% mumwedzi gumi nembiri yapfuura. Uye, izvi zvichifunga nezvevakuvara vazvino.
Sekureva kwaHenri Arslanian, mukuru wepasirese wekristpto kufekisheni yekuongorora PwC, kudzikira kwemutengo kunogona kuenderera.
Handingashamiswe kuona vamwe vatongi uye vagadziri vemitemo vachiita zvakafanana nezviremera zveChinese mumavhiki anotevera nekuyambira vatengesi nezve njodzi dzekufungidzira kwekutengesa kana kusagadzikana kwemusika we cryptocurrency.
Ikoko kunoratidzika kunge kune chibvumirano pakati pevatengesi kana.. Nepo mari nyowani dzichiramba dzichipinda mumusika zuva rega rega, dzimwe dzakaita seUBS Wealth Management nePimco dzakaratidza kusachengetedza nezve zvinogona kuita mari yemadhijitari sekirasi yeasset.
Ichokwadi ndechekuti nepo Bitcoin yakaramba iri svikiro rekutsinhana mukutengesa kweInternet, kushandiswa kwayo kwakakurudzirwa kwazvo. Kana cybercriminals kana ma regulator vaisazvifarira. Kune vekare, kuyedza kuvabira kwanga kusisina mubairo wakaringana, uye vekupedzisira vaiziva kuti neimwe nzira imwe mari yaiswa muBitcoins yaizodzokera kudunhu repamutemo.
Asi, payakazova nyaya yekufungidzira, hapana chimwe chezvakanakira chaizogara kwenguva refu. Mari yesimba yekuzvigadzira yakakura, matsotsi anoiona sechinhu chekurwisa uye nyika sekutyisidzira masimba avo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » China ichipesana neBitcoin. Iyo bubble inopera here?